Semalt: Amashishini amancinci njengenjongo yokuzithandayo yabaphuli be-Cyber
Izinto ziqhelekileyo kwi-MNH Platinum, inkampani ejongene nokuqeshiswa kwezithuthi. NcinaneBeyayazi ukuba nje iqhosha lekhonkco le-imeyli laliza kufaka ibhizinisi lengozini.
Kunyaka ophelileyo kunyaka, inkampani esekelwe kwi-Blackburn ifumane iifayile zayo eziyi-12, 0000 ezikwinkampaniencwecwe inethiwekhi. Emva koko, izigwenxa zazifuna intlawulelo ibe ngama-3,000 angama-£ ukuze idibanise iifayile - psychiatry telemedicine.
Ngazo zonke iinzame zokususa intsholongwane ngaphandle kokulahlekelwa ngedatha ebalulekileyo engabonakali,umbutho wawungekho nxaxheba kunokuba uhlawule. Umlawuli wenkampani uMark Hindle wathi abazange bazilungiselele ngokupheleleyongenxa yokuhlaselwa kwe-cyber ngenxa yokunyanzeliswa kwento enokuthi ihlasele ngayo loo nkampani.
Eli gaba alikho elide kunye nabaqeqeshi baqaphele ukuba amashishini amancincingakumbi ukongela ukuhlaselwa kwe-cyber ukususela kwiimeko ezininzi ezingakulungele.
u-Andrew Dyhan, uMphathi weNtengo kaMthengi Semalt IiNkonzo zeDivithali, ixoxa ngendlela i-cyber-criminals ehlasela ngayo ishishini elincinci.
Ngokomlando, amashishini amancinci kunye aphakathi (i-SMEs) ayilona ejoliswe ngokuqhelekileyo kobugebengu be-cyberkodwa ngo-2015, u-Toni Allen, uxela ukuba izinto zatshintshile kakhulu. Ngokwenziwe uphando olwenziwa ngu rhu lumente malunga nokuphulwa kwezokhuseleko,Amaphesenti angama-75 amabhizinisi amancinci abike ukuba kungenzeka ukuhlaselwa ngo-2012 kwaye ukunyuka kwenyuka ngo-2013 no-2014..
Izibalo ukusuka eSyantec, iqumrhu elijongene nokhuseleko lwe-cyber lubonisa ukuba ngaphezu kwesiqingathaUmkhonto uhlaselo oluphambili oluqhutywe nge-imeyile ngo-2012 lwalukunxulumene namashishini amancinane.
Umgaqo omtsha we-Yurophu wenza ukuba ukhuseleko lwe-cyber kwi-SME lube lukhulu ngakumbikuba benenjongo yokukhusela idatha yabathengi. Umgaqo osandul 'utsha uphuhliso uza kudlala ngo-2018 kwaye unokubangela ukubaintlangano ihlawulwa iipesenti ezi-4 zemali engenayo yonyaka okanye i-€ 20m nayiphi na into enkulu yokuvumela ukuphulwa kwezokhuseleko ukuphazamisakunye nedatha yabaxhasi.
Izigwenxa ziqonda ii-SME njengezinto ezijoliswe kuzo ezingakumbi kwiimeko ezininzi, ziyizindlela zokufumana umvuzo omkhulu.
Inkqubo ye-Cyber ​​Street, iqhinga elilawulwa yi-Ofisi ye-Home libalaselisa oku kulandelayonjengezona zinto ezisisiseko zokusongela ama-SME:
Ukuhlaselwa kwenzeka xa izigwenxa zifikelela kwinethiwekhi yombutho ngokucwangcisaukukhwabanisa okungahambelwanga ngaphakathi kweso sicelo, okwenze kube lula ngabo ukuba bafumane iinkcukacha zenkampani.
Kuye kwenzeka xa iqela lesicelo esinobungozi kwiimeko ezininzi zifunyenwe nge-phishingI-imeyile ivale ulwazi malunga nenethiwekhi yombutho. Emva koko, izigwenxa zicela ihlawulelo kwi-£ 500- £ 1,000 ukuya kwii-1,000ufumana ukhiye wokumisa.
Kwiimeko ezininzi, abantu banxibelelwano oluxhomekeke kunabo bonke kwikhenketho elinikezelwayo, kwaye kubalulekileisahlulo seenkcukacha zolwaphulo zibangelwa ukuba idata lilahlekile okanye lisasazwe kumntu ongalunganga. Kwanokuhlaselwa okuqhelekileyozinokuchaphazeleka kakhulu kwiimeko apho i-PII ebalulekileyo ibandakanyeka khona.
Ukulahlwa kwenkonzo yokuhlaselwa
Xa inhlangano inomthamo omkhulu wolwazi kumaseva ayo iqhutyweishaneli enobungozi. Olu hlobo lokuhlaselwa lungenziwa ngokukhawuleza ngokutyalomali.
Kuyenzeka xa umhlaseli efanisa umntu ophezulu kunye nenkampani mhlawumbiukukhwabanisa okanye ukukhwabanisa i-akhawunti yabo ye-imeyile kunye nokunyanzelisa umntu ngegunya lemali ukuba enze intlawulo.